မိဘမေတ္တာ: October 2008
သင့် အိမ် ကို တည် ဆောက် ပါ။
အသက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် လှ တဲ့ လက်သမား ဆရာ တ ယောက် ဟာ သူ့ အ လုပ် ကို စွန့် လွှတ် အ နား ယူ ဖို့ အချိန် ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ တယ်။ သူ ဟာ ဒီ လက် သ မား အ လုပ် ကို စွန့် ပြီး လွတ် လွတ် လပ်လပ် ပျော် ပျော် ပါး ပါး အ တိုး ချ ပြီး မိ သား စု တွေ နဲ့ ဘဝ ကို အ ချိန် ကုန် ဖြတ် သန်း ဖို့ အ ကြောင်း၊ ပင် စင် ယူ စီ မံ ကိန်း တွေ ကို သူ့ ရဲ့ ကန် ထရိုက် တာ ကို ပြော ပြ ခဲ့ တယ်။ သူ ဟာ အ နား ယူ တော့ မှာ ဖြစ် တဲ့ အ တွက် ကြောင့် သူ ရဲ့ အ ပတ် စဉ် လ စာ လေး ကို လွှမ်း တမ်း တ နေ ရတော့ မယ် ဆို တာ တွေ ကို ရင် ဖွင့် လို့ နေ ခဲ့ တယ်။ သို့ သော် လည်း ကန် ထ ရိုက် တာ ဟာ သူ့ ရဲ့ အား ကိုး ရတဲ့ အ လုပ် သမား တ ယောက် ဆုံး ရှူံး ရ မှာ ကို စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် နေ ခဲ့ တယ်။အဲ ဒီ နောက် မှာ တော့ လက် သ မား ဆ ရာ ကို သူ့ အ တွက် နောက် ဆုံး အ နေ နဲ့ အိမ် တ လုံး ထပ် ဆောက် ပေး ဖို့ တောင်း တောင်း ပန်ပန် နဲ့ သူ ကို မျက် နှာ သာ ပေး ရန် ခွင့် တောင်း လာ လိုက် တော့ တယ်။ လက် သမား ဆရာ ဟာ သူ မ လုပ် ပေး ရင် လဲ မ ကောင်း တတ် လို့ လုတ် ပေး ဖို့ ကို ဂတိ ပေး လိုက် ရ တယ်။ ဒါ ပေ မယ့် အ လုပ် ချိန် တိုင်း မှာ သူ ဟာ စိတ် ပါ လက် ပါ လုပ် ကိုင် မှု မ ရှိ ခဲ့ ပါ ဘူး။ အဲဒီ အ ပြင် သူ ဟာ သစ် သား အ ဟောင်း တွေ၊ ပစ္စည်း အဟောင်း တွေ နဲ့ အ ဆင့် အ တန်း နှိမ့် ကျ တဲ့ ပုံ စံ ဒီ ဇိုင်း တွေ ကို အ ဓိ က ထား ၍ အ သုံး ပြု ကာ အိမ် ကို ပြီး လျင် ပြီး ရော ဆို တဲ့ သ ဘော နဲ့ ဖြစ် သ လို ဆောက်ခဲ့ တယ်။ သူ ရဲ့ အ သက် မွေး ဝမ်း ကြောင်း ပ ညာ ကို ဒီ လို ပြု လုပ် ခြင်း ခြင့် အ ဆုံး သတ် တာ ဟာ စိတ် မ ကောင်း စ ရာ ဘဲ ဖြစ် တယ်။လက် သ မား ဆရာ ဟာ အ ချိန် တန် လို့ ဆောက် ပြီး သွား တဲ့ အ ခါ မှာ ကန် ထ ရိုက် တာ ဟာ အိမ် ကို စေ့စေ့ စပ်စပ် လာ ကြည့် ခဲ့ တယ်။ အဲ ဒီ နောက် မှာ သူ ဟာ လက် သမား ဆရာ ကြီး ကို အိမ် သော့ လှမ်း ပေး ပြီး ပြော လိုက် တယ်။
" ရော့ အိမ် သော့ ဒီ အိမ် က ခင် ဗျား အ တွက် ကျွန် တော် ရဲ့ လက် ဆောင် ပေါ့ "
လက် သမား ဆရာ ဟာ ကို အ တော် ကို အံ့ အား သင့် သွား တယ်။ သိပ် ကို ရှက် စ ရာ ကောင်း တဲ့ အ ရာ ပါဗျာ။ သူ ကိုယ် သူ ရှက် ပြီး နောင် တ များ စွာ လဲ ရ နေ ခဲ့ တယ်။ သူ ပြီး ပြီး ရော ဆို ပြီး ဆောက် ခဲ့ တဲ့ အိမ် လေး ဟာ သူ ကိုယ် တိုင် နေ ရမယ့် အိမ် ဖြစ် တယ် ဆို တာ အ စ က တည်း က သာ သူ သိ ခဲ့ ရင် သူ ဒီ ထက် ပိုပြီးကောင်း အောင် ဆောက် မှာ သေ ချာ ပါ တယ်။
ကျွန် တော် တို့ တ တွေ လက် သ မား ဆရာ ဘက် ကို ဝင် ကြည့် ကြ ရ အောင် လားဗျာ။ ကျွန် တော် တို့ ဟာ ကျွန် တော် တို့ နေ ထိုင် ရ မယ့် အိမ် မှန်း မ သိ ဘဲ အိမ် ထဲ မှာ ထည့် ရ မယ့် အ ကောင်း ဆုံး ဆို တာ တွေ ကို လျစ် လျူ ရှူ ပြီး နေ့ ရှိ သ ၍ ဖြစ် သ လို ဆောက် လုပ် လာ ခဲ့ မိ တာ နောက် ဆုံး တ နေ့ မှာ အဲဒီ အိမ် ဟာ ကျွန် တော် တို့ နေ ရ မှန်း လည်း သိ ရော အ စ က နေ ပြန် ပြင် ပြီး ဒီ ထက် ကောင်း အောင် ပြန် လုပ် ဖို့ ဆို တာ မ ဖြစ် နိုင် တော့ ပါ ဘူး။ အ စ က သာ သိ ရင် ရင် ဒီ ထက် ကို အ ဆ ထောင် နဲ့ သောင်း နဲ့ ချီ ပြီး ကောင်း အောင် ဆောက် ဖြစ် မှာ သေ ချာ ပါ တယ်။ အ ခု တော့ အ နောက် ကို ကျွန် တော် တို့ ပြန် သွား လို့ လဲ မ ရဘူး။ ကျွန် တော် တို့ ဟာ လက် သ မား တွေ ဘဲ ဖြစ် ကြ တယ်။ နေ့ စဉ် နေ့ တိုင်း သံ ရိုက် ရ တယ်။ ပျဉ် ခင်း ရ တယ်။ အကာ အ ရံ တွေ ဆောက် ရ တယ်။ အ စ ရှ်ိ က သ ဖြင့် ပေါ့ ဗျာ။ " ဘ ဝ ဆို တာ ကိုယ် နေ့ တိုင်း လုတ် ဆောင် ရ တဲ့ စီ မှန် ကိန်း ဘဲ ဖြစ် တယ် " လို့ ပညာ ရှိ တ ဦး က လည်း အ ဆို ရှိ ဖူး ပါ တယ်။ ယ နေ့ ကျွန် တော် တို့ ဘာ ကို ဆောင်ရွက် ရ မည် ဆို တဲ့ သဘော ထား ကို သိ ရှိ ရ မယ်။ ကျွန် တော် တို့ ဟာ မ နက် ဖြန် မှာ နေ ရ မယ့် အိမ် ကို ကျွန် တော် တို့ ကိုယ် တိုင်း စ နစ် တ ကျ ပ ညာ ရှိ စွာ ကူ ညီ ပြီး ဆောက် လုပ် နိုင် ရ မယ်။
အညတြ (ခေတ္တ န ယူး ယောက်)
ဘာ သာ ပြန်
ဘယ် အ ကောင် နှစ် မှာ သင် မွေး လဲ
၁၃၇ဝ(မြန် မာ သ က္က ရာဇ်)
2008(ခရစ် သက္က ရာဇ်)
4706(တ ရုတ် သက္က ရာဇ်)
တ ရုတ် နှစ် အ လိုက် အ ကောင် များ
Ox Tiger Hare Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig Rat
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004 2005 2006 2007 2008
နွား ကျား ယုန် န ဂါး မြွေ မြင်း ဆိတ် မျောက် ကြက် ခွေး ဝက် ကြွက်
၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈
နှင်း ဆီ တန် ဖိုး
ရိုး သား ဖြောင့် မတ် တဲ့ လူ တစ် ယောက် ဟာ တနေ့ မှာ နှင်းဆီ ပန်း မျိုး လေး တစ် ပင် ကို စိုက် ပျိူး ဘို့ အိမ် ကို သယ် လာ ခဲ့ ပြီး ပန်း မ ပွင့် ခင် မှာ ပန်း ပင် ကို ဂရု တ စိုတ် နေ့ စဉ် အ ချိန် မှန် ရေ လောင်း ခြင်း ဖြင့် သေ သေ ချာ ချာစနှစ် တ ကျ ကြည့် ရှု ပြီး နေ ခဲ့ တယ်။ အ ချိန် တန် ကြာ လာ တဲ့ အ ခါ မှာ ပန်း ပင် လေး ဟာ မကြာ ခင် မှာ ပွင့် တော့ မယ့် ပန်း ဖူး လေး အ ဖြစ် ကို ရောက် ရှိ လာ ခဲ့ တယ်။သို့ ပေ မယ့် လည်း ပန်း ပိုင် ရှင် ဟာ ပင်စည် ပေါ် က အဆူး တွေ ကို တွေ့ လိုက် ရ တဲ့ အ ခါ မှာ တခု တွေး မိ သွား တော့ တယ်။ " အ ရမ်း လှ ပ ပြီး မွှေး ကြိုင် တဲ့ ပန်း တ ပွင့် ဟာ ဘယ် လို မှ ဒီ လို ချွန် ထက် ပြီး အ ဆူး တွေ များ တဲ့ အ ပင် က နေ ဖြစ် လာ နိုင် မှာ မ ဟုတ် ဘူး " လို့ သူ ဟာ ကြေ ကွဲ ဝမ်း နည်း စွာ တွေး တော နေ လိုက် တယ်။ အဲ ဒီ အ တွက် ကြောင့် သူ ဟာ ပန်း ကို အ မှု မဲ့ ထား ပြီး ဂ ရု တ စိုက် ရေ လောင်း ခြင်း ကို ရပ် ဆဲ လိုက် တော့ တယ်။ အဲ ဒီ အ တွက် ကြောင့် ဘဲ သိပ် မ ကြာ ခင် မှာ ပွင့် တော့ မယ့် နှင်း ဆီ ပန်း လေး ဟာ သေ ဆုံး သွား ခဲ့ ရတယ်။
ဒီ အရာ ကိုကျွန် တော် တို့ ဘ ဝ တ တွေ နဲ့ ယှဉ် ကြည့် ကြ ရ အောင် လား ဗျာ။ လူတိုင်း လူ တိုင်း မှာ နှင်းဆီ လေး တ ပင် ဆီ ရှိ ကြ ပါ တယ်။ လူ တွေ တော်တော် များ များ ဟာ ကိုယ့် ကို ကိုယ် ပြန် ကြည့် ကြ ပြီး တော့ အဆူး တွေနဲ့ အပြစ် အ နာ အဆာ တွေ ဘဲ ရှိတယ် လို့ မြင် ကြ တယ်။
ဘယ် လို ကောင်း တဲ့ အရာ မှ ကျွန် တော် တို့ တွေ လုပ် ဆောင် နိုင် မှာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး လို့ စိတ် အား ငယ် တတ် ကြ တယ်။ ကျွန် တော် တို့ ဟာ ကိုယ့် ကို ကိုယ် အ ထင် သေး စိတ် နဲ့ ဘယ် အ ရာ ကို မ ဆို ဖြစ် မ လာ နိုင် ဘူး၊ ရှိ မ လာ နိုင် ဘူး၊ ပြီး မြောက် မ အောင် မြင်နိုင် ဘူး အ စ ရှိ သ ဖြင့် သို့ လော သို့လော နဲ့ လက် လျော့ တတ်ကြ တယ်။ ကျွန် တော် တို့ မှာ ရှိ တဲ့ ကောင်း တဲ့ အ ရည် အ ချင်း တွေ ကို သ တိ မ မူ မိ ဘဲ ရေလောင်း ဖို့ ကို အ မြဲ တွေ ဝေ နေ တတ် ကြ တယ်။ ဒီ လို အ ကျိုး ဆက် တွေ ကြောင့် ကျွန် တော် တို့ ဆီ မှာ ရှ်ိ တဲ့ ပန်း ပင် လေး တွေ ဟာ ပန်း ဖူး လေး ဘဝ (သို့) ပန်း ဖူး ဘဝ မ ရောက် ခင် မှာ ဘဲ ငြိုး နွမ်း ပြီး သေ သွား တတ်ကြ တယ်။ ပြီး တော့ ကျွန် တော် တို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်း ဆောင်နိုင် တဲ့ အ ရာ တွေ ကို အ မှန် တ ကယ် ရှိ နေ တာ ကို လစ် လျူ ရှူ လိုက် ကြ တော့ တာ ပါ ဘဲ။
တချို့သော သူ တွေ က တော့ သူ တို့ မှာ နှင်း ဆီ ပန်း လေး တွေ ရှိ တာ မ သိ ကြ ပါ ဘူး။လူ တ ယောက် အ တွက် လက် ဝယ် ထား ရှိ သင့် တဲ့ အကောင်းဆုံး လက် ဆောင် က တော့ အဲ ဒီ လို နှင်းဆီ ပန်း ရှိ ကြောင်း မ သိ တဲ့ သူ ကို ကူ ညီ ဖေး မ သင့် တဲ့ အ ရာ ဘဲ ဖြစ် တယ်။ အခြား တ ယောက်ရဲ့ အ နာ ဂတ် ပင် စည် ပေါ် က ဆူး တွေ ကို သိမ်း ယူ ပေး ပြီး တော့ သူ တို့ရဲ့ နှင်း ဆီ ပန်း လေး တွေ ကို သူ တို့ ကြား မှာ လှ ပ မှု ရှိ အောင် ရှာ ဖွေ ပေး သင့် တယ်။ ကျွန် တော် တို့ တာ သူ တို့ မှာ ရှိ တဲ့ နှင်း ဆီ ကို ဖော် ပြ ခဲ့ မယ် ဆိုရင်သူ တို့ ဟာ သူတို့ တွေ ရဲ့ ဆူး တွေ ကို အောင် မြင် စွာ နှိမ်း နှင်း နိုင် လိမ့် မယ်။ အဲဒီ နောက် မှာ သူတို့ တွေ ရဲ့ ပန်း တွေ ဟာ အ ချိန် တိုင်း မှာ စွင့် ကား ဖွင့် ထား လာ မှာ မု ချ သေ ချာ ပါ တယ်။ကျွန် တော် တို့ ဘဝ ထဲ ကို အဲ ဒီ လို အ မှား အ မှန် တွေ ကို သိ ရှိ ပြီး စိတ် ထား မြင့် မြတ် တဲ့ လူ မျိူး တွေ ကို အသိ အ မှတ် ပြု ပြီး ကြို ဆို အား ပေး လက် ခံ သင့် တယ်။ဒီ အ ရာ က တော့ လူ တယောက် ကို ကြည့် ရှူ စောင့် ရှောက် ဖို့ အ တွက် အ ကျင့် ကောင်း လေး တ ခု ပါ ဘဲ။
(အဓိက က တော့ ဘယ် အ ရာ မျိုး မ ဆို ဘာ ဘဲ လုတ် ခဲ့ လုတ် ခဲ့ အဲ ဒီ အ ရာ ကို ပြီး မြောက် အောင် လုတ် သင့် တယ်။ ကိုယ် မှာ ရှိ နေ တဲ့ အ ရည် အ ချင်း ကို မ မြင် တာ ကြောင့် တွေ ဝေ တွန့် ဆုတ် နေ မယ့် အ စား အ နည်း ဆုံး ကြိုး စား ပြီး လုတ် ဆောင် ခြင်း ဟာ ဘာ မှ မ လုတ် ဘဲ ထိုင် နေ တာ ထက် ကို ပို ပြီး ကောင်း မှာ အ သေ အ ချာ ဘဲ မ ဟုတ် ပါ လား ဗျာ။)
(အညတြ)ခေတ္တ နယူး ယောက်
ကိုခဲတန် ရဲ့ ဥပမာ
ခဲတန် ပြု လုပ် သူ တစ် ယောက် ဟာ ကိုခဲတန် ကို ခဲတန် ဗူး ထဲ မ ထည့် ခင် မှာ စား ပွဲ ပေါ် မှာ တင် ပြီး အ မှာ စကား လေး တွေ မှာ နေ ပါ တယ်။
" ကိုခဲတန် ရေ မင်း ခဲ တန် ကောင်း ဖြစ် ဘို့ အ ချက် ငါး ချက် ကို သိဖို့ လို အပ် တယ်။" သူ က ကို ခဲတန် ကုိ လှမ်း ပြော လိုက် တယ်။
" မင်း ကို ကမ္ဘာ ကြီး ထဲ ကို မ ပို့ ခင် ဒီ အခု ပြော မဲ့ အ ရာ ကို အ မြဲ သတိ ရ နေ ပြီး ဘယ် တော့ မှ မ မေ့ ပါ နဲ့။ ဒါ ဆို ရင် မင်း ဟာ အ တော် ဆုံး အကောင်းဆုံး ခဲ တန် ဖြစ် လိမ့်မယ်။
တစ် အ ချက်။ ။မင်း ဟာ အေ ကာင်း ဆုံး အ ရာ တွေ ကို စွမ်း ဆောင် နိုင် ဖို့ မင်း ခွင့်ပြု ထား တဲ့ တစုံ တယောက် ရဲ့ လက် ကို မင်း မြဲမြဲ ဆုပ် ကိုင်း နိုင် ရ မယ်။
နှစ် အ ချက်။ ။အ ချိန်း တိုင်း အ ချိန်း တိုင်းမှာ မင်း ဟာ ပို ပြီး ကောင်း မွန် ချွန် ထက် တဲ့ ကိုခဲတန် ဖြစ်လာဘို့လိုအပ်တာ ကြောင့် နာကျင်မှု ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ ပေါင်း မျိုး စုံ တွေ့ ရ မယ်။
သုံး အ ချက်။ ။မင်း ဟာ အ မှား တစုံ တရာ မှား ရေး မိတဲ့ အခါ မှာ အဲ ဒီ အမှား တွေ ကို ပြန်လည် ပြုပြင် နိုင် ရမယ်။
လေး အ ချက်။ ။အ ရေး ကြီး ဆုံး အ ရာ က တော့ မင်း ရဲ့ ရင် ထဲ က စိတ်ရင်း အ မှန် စိတ် ဓာတ် တွေ ဘဲဖြစ် တယ်။
ငါး အ ချက်။ ။မင်း အ သုံး ပြုတဲ့ စာ မျက် နှာ တိုင်း မှာ မှတ် ရာ လေး တွေ မင်း ထား သင့် တယ်။ ဘယ် လို အ ခြေနေ မျိုး မှာ ဘဲ ဖြစ် ဖြစ် မင်း နောက် မ ဆုတ် ဘဲ ရှေ့ ဆက် ရေး ချ သင့် တယ်။"
ကိုခဲတန် ဟာ သဘော ပေါက် သွား ပြီးသူ့ရင် မှာ အဲဒီ အ ချက် တွေ ကို သေ သေ ချာချာ လိုက် နာ ဖို့ သံ န္နိ ဌာန် ချ ထား ပြီး ဖြစ် ကြောင်း၊နဲ့ အမြဲ သ တိ တ ရရှိ နေ မယ် ဆို တဲ့ အ ကြောင်း ကို ဂတိ ပေး ခဲ့ ပြီး ခဲတန်ဗူး ထဲကို ဝင် သွား ခဲ့တယ်။
အ ခု တော့ ကျွန် တော် တို့ ကို ကျွန် တော် တို့ (ကိုခဲတန်) နေ ရာ က ဝင် ပြီး နေ ရအောင်။
တတ် နိုင် သ လောက် အတော် ဆုံး လူ ဖြစ် အောင် ကျွန် တော် တို့ ကို ကျွန် တော် တို့ ကြိုး စား တဲ့ အ ခါ မှာ ကို ခဲ တန် ရဲ့ ဥပမာ လေး ကို အ မြဲသ တိ ရ ကျင့် သုံး သင့် တယ်။
တစ်။ ။ ကျွန် တော် တို့ တ တွေ ဟာ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အ စ ရှိ တဲ့ အလုပ်ကြီး အ ကိုင် ကြီး တွေ ကို လုတ် ဆောင် တဲ့ အခါ မှာ ဗုဒ္ဓ ဘုရား ရှင် တော် မြတ် ရဲ့ အ ဆုံး အ မ အောက် မှာ ဆုံး မ ထား ရှိ ခဲ့ တဲ့ မြင့် မြတ် တဲ့ စိတ် ထား ကလေး တွေ နဲ့ ဆောင် ရွက် လျှင်ဘယ် အ ရာ ကို မ ဆို ပြီး မြောက်အောင် မြင် နိုင် မှာ ဖြစ် တယ်။
နှစ်။ ။ အ ချိန်း တိုင်း အ ချိန်း တိုင်းမှာ ကျွန် တော် တို့ ဟာ ထက် မြက် နေ ဖို့ အ တွက် လို အပ် တာ ကြောင့် ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ ဘဝ မှာ နာကျင်မှု ဝေဒနာ အ ခက် အ ခဲ ပေါင်း မျိုး စုံ ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ တွေ ကို ကျော် ဖြတ် ဖို့ အ တွက် စိတ် ဓာတ် မြင့် မား သန် မာ နေ ဖို့ လို အပ် တယ် ။
သုံး။ ။ ကျွန် တော် တို့ ဟာ ဘာ အ မှား ဘဲ လုပ် ခဲ့ လုပ် ခဲ့ ကိုယ် လုပ် မိ တဲ့ အမှား တွေ ကို ပြုပြင်နိုင် တဲ့ အ စွမ်း ရှိ ရမယ်။
လေး။ ။ အ ရေး ကြီး ဆုံး အ ပိုင်း က တော့ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ ရင် ထဲ က စိတ် ရင်း ကောင်း စေ တ နာ အ မှန် တွေ ထား တတ် ဖို့ ဘဲ ဖြစ် တယ်။
ငါး။ ။ဘယ် အ ရပ် မျက် နှာ မှာ ဘဲ ကျွန် တော် တို့ ဘ ဝ တိုး တက် မှု့ အ တွက် လျှောက် လှမ်း၊ လျှောက် လှမ်း ရောက် ရာ အ ရပ် မှာ မိတ် ဆွေ ကောင်း ထားရ မယ်။ ဘယ် လို အ ခြေ အနေ အ ထား မျိုး မှာ ဘဲ ဖြစ် ဖြစ် ကျွန် တော် တို့ ဟာ ဆုံး ဖြတ် ချက် ချ ပြီး ရင် နောက် မ ဆုတ် ဘဲ ကျွန် တော် တို့ အ လုတ် ကို ပြီး ဆုံး အောင် လုတ် သင့် တယ်။
ဒီ (ကိုခဲတန်) ဥပမာ ဟာ ကျွန် တော် တို့ ဦး တည် ချက် ကို ပြီး မြောက် လှုံ့ဆော် စေ တဲ့ အ ပြင် ကျွန် တော် တို့ ကို ထူး ခြား တဲ့ လူတော် လူ ကောင်း တွေ ဖြစ် စေ ပါ တယ်။
ခြုံငုံ ပြော ရရင် တော့ ဘဝ ကြီး ဟာ အ ဓိပ္ပာယ် ပြည့် စုံ မှု မရှိ ဘူး၊ ဘာ တစ် ခု မှ ကိုယ့် အစွမ်း အစ နဲ့ ဖြစ် အောင် မ လုပ် နိုင် ဘူး အစ ရှိ တဲ့ အ တွေး တွေ ကို စိတ် ပျက် လက် ပျက် နှင့် တွေး တော စေ တဲ့ အရာ ကို ကျွန် တော် တို့ ကို ကျွန် တော် တို့ ဘယ် သော အ ခါ မှ ခွင့် မ ပြု သင့် ဘူး။
သိပ်မကြာ သေး ခင် ကာ လ တုန်း ကပေါ့ ဖ ခင် တယောက် ဟာ ငါး နှစ် အရွယ် သမီး လေး တယောက် ကို အိမ် မှာ ရှိ တဲ့ လက် ဆောင် ပစ္စည်း ထုပ် တဲ့ ရွှေ ရောင် စက္ကူ လေး တွေ နဲ့ ထုတ် ပြီး မွေး နေ့လက်ဆောင် တ ခု ကို သူမ မွေး နေ့ မှာ ပေး ခဲ့ တယ်။ ကောင် မလေး ဟာ သူမ ရဲ့ အ ဖေ ပေး တဲ့ လက် ဆောင် ဗူး ကို ဖွင့် ကြည့် လိုက် တဲ့ အ ခါ မှာ တော့ သူမ ကို ဒေါ သ အ မျက် ခြောင်း ခြောင်း ထွက် စေ ခဲ့ တယ်။ သူမ က ဖခင် ဖြစ် သူကို အော် ပြော လိုက် တယ်။ " အဖေ မ သိ ဘူး လား အဖေ သူများ တ ကာ ကို လက် ဆောင် ပေး မယ် ဆို တ စုံ တ ခု တော့ ဗူး ထဲ မှာ ရှိသင့် တာ ပေါ့ အခု တော့ ဘာ မှ လည်း မ ရှိဘူး" ။ ဖခင် ဖြစ် သူ ဟာ သမီး ဖြစ် သူ ကို အား ငယ်စွာ နဲ့ ကြည့် လိုက် ပြီး " အို သမီး ရယ်...အဲဒီ ဗူး ထဲ မှာ ဗလာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး သမီး ရာ။ ဖေဖေ့ နုတ် ခမ်း နဲ့ အ နှမ်း တွေ အ များ ကြီး ထည့် ထား ပါ တယ် သမီး ရယ်။ အဲဒီ အ နှမ်း တွေ အား လုံး က သမီး အ တွက် ကြီး ပါ ဘဲ သမီး။ " သမီး ဖြစ် သူ ဟာ အ ရမ်း ကို စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် သွား ပြီး သူမရဲ့ လက် ကို သူ မ အ ဖေ ပ ခုန်း ပေါ် ကို တွဲခို ပြီး ဖခင် ကို အ သာ တ ကြည် နှမ်း ရှိူက် လိုက် တယ်။ ပြီး တော့ ဖခင် ရဲ့ နား နား ကို ကပ် လိုက် ပြီး သမီး လေး ကို ခွင့်လွှတ် ဖို့ တောင်း ပန်စ ကားတိုး တိုး လေး ကပ်ပြော လိုက် တယ်။ ဒီ အ ဖြစ် အ ပျက် က တော့ သမီး ဖြစ် သူ ဟာသူ မ တ သက် စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် စေ ခဲ့ တယ်။ သမီး ဖြစ် သူ ဟာ သူ့ ဖခင် အ နှမ်း တွေ ပါ တဲ့ ဗူး လေး ကို သူ့ ကု တင် ခေါင်း ရင်း က ဗီ ဒို ပေါ် မှာ တ သက် လုံး သိမ်း ထား ခဲ့ တယ်။ သူ မ ဟာ ပြ ဿနာ တခုခု ကြုံတိုင်း သူ့ ဖ ခင် ရဲ့ အ နှမ်း တွေ ပါ တဲ့ ဗူး လေး ကုိ ထုတ် ပြီး အား အင် အ သစ် တွေ ရယူ ခဲ့ တယ်။
အ မှန် တကယ် တော့ ကျွန် တော် တို့ အ ယောက် ဆီ တိုင်း မှာ ဒီ လို အ ဖိုး မ ပြတ် နိုင် တဲ့ အာရုံ ခံ စား မှု့ လက် ဆောင် ဗူး မျိုး ကို ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ၊ နဲ့ သူ ငယ်ချင်း ဆီ တိုင်း က ရ ပြီး သား ဘဲ ဖြစ် တယ်။ ဒီ လို ရိုးရှင်း ပြီး တန်ဘိုး မ ဖြတ် နိုင် တဲ့ အရာ မျိုး ကို လက် ရှိ မကွာ ကိုယ် နဲ့ အ တူ အမြဲ ဆုတ် ကိုင် ထား ပြီး ပြဿနာ အ ခက် အ ခဲ တွေ နဲ့ကြုံတိုင်း အား အ င် အ သစ် တွေ ရယူကြ ပါ စို့လား ။
(ဤဘာ သာ ပြန် အား မမမွန်း ၏ အ ကြံ ပြုချက် အရ ဇာတ် ကောင် အ နေ အ ထား အား စာ ဖတ် ရာ ၌ အ ဆင် ပြေ စေ ရန် ရွှေ့ ပြောင်း ထား သည်။ ကို ဝေ မင်း ဆီ မှ လည်း အကြံ ရယူရာ ဤ အ ခု စာ မူ မှာ စာ ဖတ် သူ တို့ အား ပို ၍ အ ဆင် ပြေ ကြောင်း သိ ရ ၍ ဤ ဘာ သာ ပြန် အား မျှဝေလိုက် သည်။ မမ မွန်း နှင့် ကို ဝေ မင်း အား ကျေး ဇူး အ ထူး တင် ရှိ ပါ သည်။)
ဤဘာသာပြန်အားအောက်ပါဝက်ဖ်ဆိုဒ်မှပြန်ဆိုထား၏။ ဇာတ် ကောင် အ နေ အ ထား ပြန်လည် ပြုပြင် ထား သည်။
စာရေးသူ အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်)2comments: .
တခါတုန်းက သား အဖ နှစ် ယောက် ဟာ တောင်တွေ နဲ့ဝန်း ရံ နေ တဲ့ တောင် ကြား လမ်း တစ်ခု ကနေ အတူ တကွ လှမ်း လျှောက် ထွက်လာ ခဲ့ ကြတယ်။ တနေ ရာ အ ရောက် မှာ သား ဖြစ် သူ က ကုန်း ဘု လေး တ ခုကို နှင်း မိပြီး ချော် လဲ သွား တယ်။ သူဟာ နာ ကျင် လွန်း တာ ကြောင့် ရုတ် တ ရက် အော် လိုက် မိတယ်။ "အား...."
အဲဒီ အခါ မှာ သူဟာ တောင် ကြား တနေ ရာ က နေ အ သံ တ သံ ကို ထပ် ခါ ထပ် ခါ ကြား လိုက် ရ တယ်။ "အား...." သူဟာ အံ့သြ စွာ နဲ့ ထပ် တ ဖန် အော် လိုက် ပြန်တယ်။" မင်း ဘယ် သူ လဲ " သူ ဟာ ထပ် ဖြေ သံ ကို ကြား ရ ပြန် တယ်။ " မင်း ဘယ်သူလဲ " အဲ ဒီ နောက် သူ ဟာ ငယ်သံ ပါ အောင် အော် လိုက် ပြန် တယ်။ " ငါ မင်း ကို လေး စား ပါ တယ် " နောက် ထပ် ဖြေ သံ ထပ်ကြား ရပြန်တယ်။ " ငါ မင်း ကို လေး စား ပါ တယ် " သား ဖြစ် သူ ဟာ ဒေါ သ ထွက် သွား ပြီး နောက် တခါ ငယ်သံ ပါ အောင် အော် လိုက် ပြန် တယ်။
" အ ရူး " နောက် ထပ် ဖြေ သံ ထပ် ကြား ရပြန် တယ်။ " အရူး " သူ ဟာ အ ဖေ ဖြစ် သူ ဖက် ကို လှည့် ပြီး မေး လိုက် တယ်။ " အဖေ ဘာ တွေ ဖြစ် နေ တာ လဲ ဗျ။ ကျွန်တော့် ကို လိုက် ပြောင် နေ တယ် တ ယောက် ယောက် တော့ " အ ဖေ ဖြစ် သူ က ပြုံး လိုက် ပြီး သူ့ သား ကို ပြော လိုက် တယ်။ " သား ရေ ဒီ မှာ ကြည့် သေသေ ချာချာ နား ထောင် နော် သား " လူကြီး ဖြစ် သူ က ထပ် တ ဖန် အော် လိုက် တယ်။ " မင်း အ တော် ဆုံး ဘဲ " ထပ် ဖြေ သံ ကို ကြား လိုက် ပြန် တယ်။ " မင်း အ တော် ဆုံး ဘဲ " လူ ငယ် လေး ဟာ အံ့ သြ သွား တယ်။ ပြီး တော့ လဲ သူ ဟာ ဘာ ကြောင့် ဒီ လို ဖြစ် ရ တယ် ဆို တာ ကို နား မ လည် ခဲ့ ဘူး။ အဲဒီ နောက် မှာ အ ဖေ ဖြစ် သူ က ဒီလို ရှင်း ပြ လိုက် တယ်။ " သား လူတွေ အား လုံး က ဒီ အ ရာ ကို ပဲ့ တင် သံ လို့ခေါ် ကြ တယ်။ သက် ရောက် မှု့ တိုင်း မှာ တန်ပြန် သက် ရောက်မှု့ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သဘော ပေါ့။ အမှန် တကယ် တော့ ဒီ အရာ က လူ တွေ ရဲ့ ဘဝကို ရည် ညွှန်း တာ ပါ။ မင်း ဘာ ဘဲ ပြော ပြော မင်း ပြော သ လို အ တိ အ ကျ တန်ပြန် တုန့်ပြန်မှု့ တွေ ပေး တယ်။ လူတွေ ရဲ့ ဘဝဟာ လည်း ဘဲ အမှန် တကယ် တော့ ရောင် ပြန် ဟတ် တဲ့ ကြည့် မှန် တချပ် လို ပါဘဲ။ ကိုယ် က ပြုံး ပြ ရင် မှန် ထဲက ပုံရိပ် က ပြန် ပြီး ပြုံး ပြ သလို၊ ကိုယ် က မဲ့ ပြ ရင် အဲဒီ ပုံရိပ် က ပြန်ပြီး မဲ့ ပြ လေ့ ရှိတယ်။ အဲဒီ တော့ သား ရေ မင်း အ ရည် အချင်း ပြည့်စုံတဲ့ လူ တော် တယောက် ဖြစ် ချင် တယ် ဆို ရင် မင်း မှာ အဲဒီ အ ရည် အချင်း တွေ နဲ့ ပြည့် စုံ နေ မှ ရ မယ် သား။ ပြီး တော့လည်း ဘဲ မင်း ကမ္ဘာ ကြီး ထဲ က တယောက် ယောက် ကို ချစ် တယ် ဆို ရင်၊ မင်း ရင် ထဲ မှာ အဲဒီ အ ချစ် တွေ က ကိန်း အောင်း နေ မှ ရမယ်။ အဲလို ဆက်စပ် တွေး တော ကြည့်ခြင်း အား ဖြင့် လူ့ ဘဝ ရဲ့ ပုံပန်း သဏ္ဌာန် တွေဟာ မင်း လုတ် ဆောင် ထား တာ အား လုံး ကို တ ချိန် ကြ ရင် အ ကုန် ပြန် ရ မယ် ဆို တဲ့ သ ဘော ဘဲ သား။ "
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘဝတွေ ဟာ မတော် တဆ အ မှု့ မဲ့၊ အမှတ် မဲ့ အခါ အား လျော် စွာ ဖြစ် တတ် တဲ့ အ ရာ မဟုတ် ပါ ဘူး ဗျာ။ အမှန် တကယ် တော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ် ဆောင် မှု့ ရဲ့ ရောင် ပြန်ထ င် ဟပ် မှု့ ဘဲ ဖြစ်တယ်။
ရောင် ပြန် ဟပ် မှု့ကို မျှော် လင့် လျက်
စာရေးသူ အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်)3comments: .
သဲ နှင့် ကျောက်တုံး
တနေ့သောအခါ လူငယ်လေး သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဟာ သဲကန္တာရ တခုကို ဖြတ်ပြီး လှမ်း လျှောက် ခရီး ထွက်လာကြ တယ်။ ခရီး တနေရာ အရောက် မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဟာ စကားများ ပြီး ရန်ထဖြစ် ကြတော့ တယ်။ အဲဒီလို ဖြစ် ကြ တဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်း တယောက်က နောက်တယောက်ရဲ့ ပါး ကို ထ ထိုး လိုက် တယ်။ အထိုးခံ ရတဲ့ လူငယ်လေးဟာ တော်တော်လေး နာသွား ပြီး စကားဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ သူဟာ သဲပြင်ပေါ်မှာ ဒီ လို ရေး ချ လိုက် တယ်။ " ယနေ့ ငါ့အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း င့ါကိုထိုး၏။ "
အဲလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သဲကန္တာရ မှာ ရှိ တဲ့ စိမ်း လန်း စိုပြေပြီး မြေသြဇာ ကောင်း တဲ့ နေ ရာ ကို ရောက်တဲ့အထိလှမ်း ဆက် လျှောက် လာ ကျ ပြီး၊ အဲဒီမှာ ခြေ လက် သန့် စင် တ ထောက် နားဘို့ ဆုံးဖြတ် လိုက် ကြတယ်။ အဲဒီ မှာ အထိုး ခံရ တဲ့ လူငယ် လေး ဟာ အခန့် မ သင့် ဘဲ နွံ နှစ်ပြီး နွံထဲ က ရုန်း မထွက်နိုင်ဘဲ သေလုမြောပါး ဖြစ် နေခဲ့ တယ်။ ထိုး လိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းက သေမယ့် ဘေး က ကယ်လိုက်ပြန်တယ်။ သေဘေး ကလွှတ်လာပြီး ပုံမှန် အနေ အထား ကိုရောက်လာတဲ့ အခါ မှာ၊ သူဟာ ကျောက်တုံး ကြီး တစ်ခု ပေါ်မှာ နောက်တ ဖန် ရေး လိုက် ပြန်တယ်။ " ယနေ့ ငါ့ အခင်ဆုံး သူ ငယ် ချင်း ငါ့ အသက် ကို ကယ်ခဲ့၏။ "
အဲဒီလက် သီး နဲ့ ထိုး လဲ ထိုး၊ ကယ်လဲကယ် ခဲ့ တဲ့ သူငယ်ချင်း က မေး လိုက်တယ်။" ငါ မင်း ကို နာကျင်အောင် လုတ်တဲ့ အခါတုန်း က မင်း ဟာ သဲပြင်ပေါ်မှာ ရေး ခဲ့တယ်။ အခု လဲ မင်း ရေး ကျောက် တုန်း ပေါ်မှာ ရေး ပြန်ပြီး။ ဒါ တွေဟာ ဘာ ကြောင့်လဲ။"
သူ့ သူငယ်ချင်း က သူ့ကို ဒီလို ပြန် ဖြေ ခဲ့တယ်။ " သူငယ်ချင်း ရေ... တစုံတယောက် က မင်း ကို နာကျင် အောင် ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ၊ မင်း ရဲ့ တုန့်ပြန် မှုတွေက ခွင့်လွှတ်ခြင်း တွေ ပါတဲ့ လေ ရဲ့ပယ်ဖျက်ခြင်း ကိုခံရမယ့် သဲပြင် ပေါ်မှာ ရေး ထား တဲ့ စာ သား တွေ လို မင်း လဲ ဘဲ သူတို့ မကောင်း တာ တွေ ကို လေ တွေ လို အ လွယ် တ ကူ ပြယ် ဖျက် သင့်တယ်။ ဒါပေ မယ့် တစုံတယောက် က မင်း ကို ကောင်း တာ တွေ လုပ် ပေး တဲ့ အခါမှာ တော့ လေ တွေ အ လွယ် တကူ မ ဖျက်နိုင်တဲ့ ကျောက်တုံး ပေါ်မှာ မင်း မှတ်တမ်း တင် ရေး သား ထား သင့်တယ်။"
(အဲဒီလို ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နာကျင်မှု့တွေ နဲ့ နာ ကျည်း မှု့တွေ ကို သဲ ပေါ်မှာ ရေး ထား တဲ့ စာ တွေ လို ဘဲ ရေး တတ်အောင် ကြိုး စား သင့်သလို ကျွန်တော်တို့ အတွက်ကောင်း ကျိုး ဖြစ် စေမယ့် အ ရာတွေကို တော့ ကျောက်တုံး တွေပေါ်မှာ မှတ်တမ်း တင် ကြရအောင် လား ဗျာ။ )
ဒီအကြောင်း လေး ကို တော့ တော်တော်များ များ သိကြ ဖတ်ဖူးကြ မယ်လို့ထင် ပါ တယ်။ အနှစ်သာရ အရမ်း ရှိတဲ့အကြောင်း ပါ။ ဒါကြောင့်ဘာသာပြန်ပြီး ဝေမျှ ခြင်း သက်သက် တာဖြစ် ပါတယ်။
တခါတုန်းက အလွန်ချမ်းသာတဲ့ ကုန်သည် သူဌေးကြီး တယောက် ဆီမှာ မိန်းမ လေးယောက် ရှိခဲ့တယ်။ သူဟာ သူ့ မိန်းမ တွေ ထဲ က စတုတ္ထ ကြင်ရာတော် ကို အချစ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး သူမကို အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး အဝတ်အစားတွေ နဲ့လက်ဝတ် ရတနာ တွေကို ဆင်မြန်းပေးတဲ့ အပြင်၊ သူမကို သူက နု ညံ့ သိမ်မွှေ့ စွာ ဆက်ဆံလေ့ ရှိတယ်။ သူဟာ သူမ ကို အရမ်းကို ဂရုတစိုက် ရှိပြီး အမြဲ လို လို အရိပ် တကြည့်ကြည့် ရှိ နေတတ်တယ်။ သူဌေးကြီး ဟာ တတိယ မိန်းမ ကိုလဲဘဲ အရမ်း ကို ချစ်ခင် မြတ်နိုး ပါတယ်။ သူဟာ သူမကို သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်း အဖော် တွေ ကြားထဲ ခေါ်သွား လေ့ရှိပြီး သူမ နဲ့ အခုလို သွား လာ နေရတာ ကို အမြဲ ဂုဏ်ယူ လေ့ရှိတယ်။ ပြီး တော့ လဲ သူမ ဟာသူ့ကို ပြစ် ပြီး တခြား လူ နောက် လိုက် သွားမှာ ကို အမြဲ စိုးရိမ် နေ တတ် ပါတယ်။ ဒုတိယ မိန်းမ ကို လဲ ကုန်သည် ကြီးဟာ ချစ်ပါတယ်။ သူမ ဟာ သူရဲ့ မိန်းမ တွေထဲမှာ တော့ စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥာဏ် အကောင်းဆုံး ဖြစ် တယ်။ သူမဟာ သူ အပေါ် မှာ စိတ်ရှည် လေ့ရှိ ပါ တယ်။ ဒီ အတွက် ကြောင့် သူမ ဟာ သူ့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ ကောင်း တ ယောက် ဆိုရင် လဲ မှား မယ် မထင် ပါ ဘူး။ ဘယ် အချိန် ဘယ် အ ခါ ဖြစ်ဖြစ် သူဌေးကြီး ဟာ ပြဿနာ အခက် အခဲ တွေကြုံ တိုင်း သူမ နဲ့ တိုင် ပင်လေ့ ရှိတယ်။ သူမ ကလဲ သူ့ရဲ့ ပြဿနာ တိုင်း ကို အမြဲလိုလို ကူညီ ဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဌေးကြီး ရဲ့ ပထမ ဆုံး မိန်းမ ဟာ အိမ်ထောင်စု ကိစ္စ မှန်သမျှ နဲ့သူရဲ့ ချမ်းသာမှု မှန်သမျှကို ထိန်း သိမ်း ရတဲ့ အပြင်၊ သူမ ဟာ သူ့ရဲ့ သစ္စာ ရှိတဲ့ အပေါင်း အဖော် တ ယောက် ဘဲ ဖြစ်တယ်။ သူမ က သူဌေး ကြီး ကို ဘယ်လောက် ဘဲ လေးလေး နက် နက်ချစ်ချစ် သူဌေးကြီး က ဒီ အခု အ ခါ မှာတော့ သူမကို မချစ်တော့ပါဘူး။ သူဌေးကြီး ဟာ သူမကို အမြဲလိုလို လျစ်လျှူ ရှူနေ တတ်တယ်။
တနေ့မှာတော့ အဲဒီ ချမ်း သာတဲ့ သူဌေးကြီး ဟာ အပြင်း အထန် ဖျားပြီး သေလု မျောပါး ဖြစ် နေခဲ့တယ်။ သိပ်မကြာ ခင်မှာ သူဟာ သေ ရတော့ မယ် ဆိုတာ ကို သူ့ ဟာ သူ သိ နေ ခဲ့တယ်။ "အင်း... ငါ့မှာ မိန်းမ လေး ယောက် တောင် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ သေ ရင် ငါ့ တယောက်တည်း ဖြစ် နေ တော့ မယ်။ ဘယ် လောက်များ ပျင်း စရာ ကောင်း တဲ့ ဘဝ ဖြစ် နေ မ လဲ နော်။" လို့ သူဌေးကြီး ဟာ အဲဒီလို တယောက်တည်း စဉ်းစား နေ မိတယ်။ ဒါကြောင့် လဲ သူဟာ သူ့ ရဲ့စတုတ္ထ မိန်းမ ကို မေး လိုက်တယ်။ " မင်း ကို ငါ အချစ်ဆုံး ဖြစ် တယ်။ မင်း ဟာ ငါရဲ့ သံ ယော ဇဉ် အရှိဆုံး ဆို ရင်လဲ မ မှား ပါ ဘူး။ မင်း ကို အ ကောင်း ဆုံး ဆို တာ တွေ ကို ဘဲ ငါ အ ကုန် ပေး ခဲ့တယ်။ အခု ငါ သေ ရတော့ မယ်။ မင်း ငါနဲ့ အတူတူ သေမင်း ဆီ ကို အ ဖော် အ ဖြစ် လိုက် ပေး ပါလား ဟင်။ " " လုံး ဝ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး " လို့ ပြော ပြီး သူမဟာ သူ့ကို နောက်ထပ် စကား တခွန်း မျှ မပြောဘဲ ကျော ခိုင်း ထွက် ခွာ သွားခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ အဖြေ ဟာ သူဌေး ကြီး ရဲ့ ရင် ဘတ် ကို အသွား ထက်တဲ့ ဓား တချောင်း က လှမ်း ထိုး လိုက် သလို တ ဆစ် ဆစ် နာကျင် နေ အောင် ခံစား လိုက် ရတယ်။ ဝမ်းနည်း နေ တဲ့ သူဌေးကြီး ဟာ နောက် ထပ် တခါ တတိယ မိန်း မ ကို မေး လိုက် ပြန်တယ်။" ငါ့ ဘဝ တ လျှောက် လုံး ငါ မင်း ကို အ ရမ်း ချစ်ခဲ့ တယ်။အခု ငါ သေ ရတော့မယ်။ မင်း ငါနဲ့ အ တူ တူ သေ မင်း ဆီကို အဖော် လိုက် ခဲ့ ပေး ပါ လား ဟာ။" " မလိုက် နိုင် ပါဘူး။ လူ့ဘဝ ကြီး က အ ရမ်း ပျော်ဖို့ ကောင်း တယ်။ ရှင် သေ သွား ရင် ကျွန် မ နောက် တယောက် ကို လက်ထပ် လိုက်မယ်။" လို့ သူမက ဒီလို ပြန်ပြောပြီး ထွက် ခွာ သွား ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို အပြု အမူ တွေ ကြောင့် သူဌေးကြီး ဟာ ပိုပြီး စိတ် မကောင်းဖြစ်သွား ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် မှာ တော့ သူက ဒုတိယ မိန်း မ ကိုမေး ပြန်တယ်။ " ငါ အကူ အညီ လို တိုင်း မင်း က ငါ့ ကို ကူညီ မှု့တွေ ပေး ခဲ့တယ်။ အခု ငါမင်း အကူ အ ညီ ကို လိုပြန် ပြီ။ ငါ နဲ့ အတူ သေ မင်း ဆီ ကို အဖော် အဖြစ် လိုက် ပေး ပါ လား။" " ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါ ကို တော့ မကူညီ နိုင် ပါဘူး ရှင်။ ဒါ ပေ မယ့် ရှင် သေသွား ရင် ရှင့် ကို အုတ်ဂူ နား ထိ တော့ အ ရောက်လိုက်ပို့ ပေး ပါ့မယ်။ " လို့သူမ ပြန်ပြော လိုက်တယ်။ သူ့မိန်းမ တွေရဲ့ အဖြေတွေဟာ သူဌေးကြီး ရဲ့ ဦးခေါင်း နဲ့ ရင်ဘတ် ကို မိုးကြိုးသွား တွေနဲ့ပြစ် ချလိုက်သလို ခံစား သွား ရတယ်။ အခု အခါမှာ တော့ သူဌေးကြီး ဟာ ကူညီသူကင်း မဲ့ ခဲ့ ပြီ မ ဟုတ်ပါ လား။ အဲဒီ လို အချိန် မှာ အသံ တ ခု ထွက်လာပါတယ်။ " ကျွန်မ ရှင် နဲ့ အတူတူ သေ မင်း ဆီကို အဖော် အဖြစ် လိုက်ခဲ့ ပါ ရစေ။" သူဌေးကြီးဟာ အသံ လာ ရာ ဘက် ကို လှည့် ကြည့် လိုက် တဲ့ အ ခါ မှာ သူ့ ပြစ် ပယ် ထား တဲ့ သူ့ ရဲ့ ပထမဆုံး ဇ နီး ဖြစ် နေ တာ ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမဟာ အရင် က လို မဟုတ်တော့ ပါ ဘူး။ အ ရမ်း ကို ပိန်လှီ လွန်း လှ ပါတယ်။ သူမ ဟာ သူ့ဒုက္ခ တွေကို အနှစ်နာခံ ရှင်း ပေး ရတာ များ လို့ ဒီ လိုဖြစ် သွား ပုံပါ။ သူဌေးကြီး ဟာ သူမ ကို စိတ် မ ကောင်း စွာ ကြည့် ပြီး သူ့ ကိုယ် သူ စိတ် နာ သွား ပါ တယ်။ ပြီးတော့" ငါဟာ မင်း ကို အစ တုန်း က ရင်း ဂရုတစိုက် ပိုပြီး ဆက်ဆံ သင့်ပါတယ်။ အခုတော့ ငါမှား ပြီ။ ငါ့ကို ခွင့်လွှတ် ပေး ပါ ကွာ" လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာတော့ သူဌေးကြီး ရဲ့ ရင် ထဲမှာ လဲ နောင်တ တွေ အ ပြည့်နဲ့ သူမကို သူရဲ့ ချိနဲ့ နေ သောလက် နဲ့ ကြင် နာစွာ သိုင်း ဖက် ထား လိုက် တယ်။ မပြုံး တာ ကြာ ပြီး ဖြစ် တဲ့သူမ ဟာ နွေး ထွေး စွာ ပြုံး လျှက် သူ့ ရဲ့ ရင် ခွင် ထဲ မှာ သူမ ရဲ့ ခေါင်း ကို မှီ လျှက် ပေါ့။သူတို့ အခန်း လေး ထဲမှာ လဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျှက်၊ ပြုတင်းပေါက် ကနေ လှမ်း မြင် နေ ရတဲ့ လမင်း လေး လဲ သူတို့နှစ်ဦးကို ပြုံး ပြီး ကြည့် နေ သ ယောင်ယောင်။ အခန်း ထဲမှာတော့ ပျော်ရွှင်မှု့တွေ နဲ့ပြည့်နက်လျှက်ပေါ့။
(ဟိုး ဟိုး ခဏလေး စာ ဖတ် သူ တို့၊ ဇာတ်လမ်း က မ ပြီး သေး ဘူးဗျ။ စာထဲကို အညတြ ရောက်လာ လို့ ဟာ ဒီ ကောင် လေး တော်တော် ရှူပ်တယ်လို့ မပြော ကြ နဲ့ နော်။ ဇာတ်လမ်း က အခုမှ စတာဗျ။ဒီ ထဲက မိန်းမ လေး ယောက်ဆုိတာ ရည် ညွန်း ပြီးမှ ရေး ထားတာ ပါ။)
အမှန် တယ်တော့ လူ တိုင်း လူ တိုင်း ရဲ့ ဘဝ မှာ မိန်းမ လေးယောက် ရှိပါတယ်။
စတုတ္ထ မိန်းမ ဆိုတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ပါ။ ဒီ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ကို အချိန် ပေး ပြီး တော့ လှပ အောင် ဘယ် လောက်ဘဲ အားထုတ် အား ထုတ် တနေ့ကျရင် (ကျွန်တော်တို့ သေတဲ့ အခါကျ ရင်)
ဒီ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး က ကျွန်တော်တို့ ကို စွန့်ခွာ သွား မှာ ဆို တာ ပါ ဘဲ။
တတိယ မိန်း မ လား ? ကျွန်တော့်တို့ ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေပါ။ချမ်း သာ ကြွယ်ဝမှုတွေပါ။ ဥပမာ။ ။နေအိမ်၊ တိုက်တာ၊ ခြံ၊ မြေ ၊ ကား...အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဒါတွေကကျွန်တော် တို့ သေ တဲ့အခါ ကျရင် တပါး သူ လက်ထဲ
ဒုတိယ မိန်းမ ဆိုတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး တွေနဲ့ သူငယ်ချင်း တွေ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိ ထင်ရှား ရှိနေစဉ်က ဘယ်လောက် ထိဘဲ နီးနီး ကပ်ကပ် ခင်ခဲ့ နေခဲ့၊ အဝေး ဆုံးမှာ ကျွန်တော် တို့ နဲ့ နေ တဲ့ တနေ့ကတော့၊ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အုပ်ဂူ အထက်မှာ သာဖြစ် တယ်။
ပထမ မိန်းမ ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝိဥာဏ် သာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် တို့ ဟာ ချမ်း သာကြွယ်ဝမှု့
တွေမှာ ပျော်မွေ့ ပြီး၊ ဝိဥာဏ် ကို ဘယ်လောက်ဘဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ထားထား၊ သူဟာ ကျွန် တော်တို့ နဲ့ တစ်ဖဝါး မှ မကွာ ထပ် ကြပ် လိုက်ပါ ရ စမြဲ ပါဘဲ။ တချိန်ကျရင် (သေဆုံးတဲ့ အခါ ကျ ရင်) ကျွန်တော် တို့ နဲ့ အတူတူ ဝိဥာဏ် က သေ မင်း ဆီ ကို အ လည် လိုက် ရ စမြဲပါဘဲ။ ဒါတွေ အား လုံး က ဓမ္မာတာ ကြီး ပါဘဲ ဗျာ။
ဖေဖေ ဆုံးမတဲ့ ဒေါသ ဆိုတာ
တခါတုန်းက လူငယ်လေး တဦးမှာ အရမ်းကို ဒေါသကြီးတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေး တခု ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီ လူငယ်လေး ရဲ့အဖေ ဟာ တနေ့မှာ အကြံတခု ရလာတာနဲ့ ထို လူငယ်လေး ကို သံထုပ် တထုပ် ကို ပေးခဲ့တယ်။ အဖေ ဖြစ်သူက သား ရေ မင်း ဒေါသ ထွက်တဲ့ အခါတိုင်း မင်း ဒီသံထုပ်ကို သယ်ပြီး အိမ် နောက်ဖေးက သစ်သား ခြံစည်းရိုး မှာ ရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီလို ရိုက်ထည့်ရင် မင်း ဒေါသ တွေကို မင်း ထိန်းချုပ် နိုင် လိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သား ဖြစ်သူ က အဖေ့ စကား ကို နားထောင်ပြီး သူ ဒေါသ ထွက်တိုင်း အိမ် နောက် ဖေး ကို သွားပြီး သံချောင်း တွေကို ပထမဆုံး နေ့မှာ ဘဲ ၃၇ ချောင်း မျှ ရိုက် ထည့် ခဲ့တယ်။ ရက် အနည်းငယ် ကြာသောအခါ သံချောင်း တွေက တဖြည်းဖြည်း ခြင်း ခြံစည်းရိုး ပေါ်မှာ များ သထက်များ လာခဲ့သော်လည်း သူ့ ဒေါသ ထိန်းချုပ်မှု့ တွေက လျော့ပါး မလာ ခဲ့ပါဘူး။ လူငယ် လေး အဖို့ ကတော့ သံချောင်း တွေကို သစ်သား ခြံစည်းရိုး ပေါ်မှာ ရိုက်ရ တာ ဟာ သူ့ ဒေါသ ထွက်တာ ကို ပိုပြီး လွယ်ကူ စေခဲ့ တယ်လို့ မြင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး သစ်သား ပေါ်ကို သံ အ ချောင်း (၅၀၀)ဝင်သွား တဲ့ အထိ သူ့ ဒေါသ တွေကို မထိန်းချုပ် နိုင်တဲ့ အပြင် ဒေါသ ထွက်တာ တွေက ရပ်မသွား ခဲ့ပါဘူး။ လူငယ်လေး က သူ့အဖေ ကို သံချောင်း တွေ ကုန်သွားကြောင်း ပြောပြတဲ့ အခါ အဖေ ဖြစ်သူက သားကို ဒီလို ပြန်ပြော ခဲ့ပါတယ်။ သား ရေ ဒီတခါ သံချောင်း တွေ မရှိတော့လို့ မရိုက်နဲ့တော့။ သား ရိုက်ထားတဲ့ သံချောင်း တွေကို သား ဒေါသ ထွက် တိုင်း တချောင်းခြင်း ဆီပြန်နုတ် ပါ သား၊ အဲလို ပြန်နုတ်ရင် မင်း ဒေါသ တွေ ကို ထိန်းချုပ် နိုင်လိမ့်မယ် လို့ အကြံ ပြုခဲ့ ပြန်တယ်။ အချိန် တွေတာ ကုန် လာခဲ့တယ်။ လူငယ်လေး သံ ပြန်နုတ်တာ ကုန်သွားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သူ့ အဖေ ကို ပြောပြမဲ့ ရက် ရောက်လာ ခဲ့သော် လည်း သူ့ဒေါသထွက်တာတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဖေဖြစ်သူရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ အဖေ ဖြစ်သူက သား လက် ကို ဆွဲပြီး သစ်သား ခြံစည်းရိုး ရှိရာ ကို ဦးဆောင် ခေါ်လာ ခဲ့တယ်။ ပြီး နောက် အဖေ ဖြစ်သူက သား ကို ဆုံးမ စကား ဒီလို ပြောပြ လိုက်ပါတယ်။ သား မင်း အရမ်း တော်တယ် ငါ့သား။ မင်း ကြည့်ကြည့်စမ်း ဒီ ခြံစည်းရိုး ပေါ်က သံပေါ်က်တွေ ဒီဟာတွေ အားလုံး ဟာ မင်းရဲ့ ဒေါသ ရိပ် တွေ ပါဘဲ သား။ ဒီ ခြံစည်းရိုး ဟာ ဘယ်တော့မှ အရင် ကလို အကောင်း အတိုင်း ပြန် ဖြစ် မလာ တော့ပါဘူး သား။ မင်း ဒေါသနဲ့ ပြောတာ တွေ အားလုံးဟာ မင်း ပြောလိုက် တဲ့ အပြောခံရ သူရဲ့ ရင်မှာ ဒီ သံပေါ်က်တွေ လိုမျိုး အမာရွက် တွေ ကျန်ထင် နေစေ ခဲ့တယ်သား။ မင်း ဓါး တချောင်း ယူပြီးတော့ သူတို့ ရင်ဘတ် ပေါ်မှာ အပေါ်က်လေး တွေ သွား ထွင်းသလို မျိုး ဖြစ်နေတယ် ။ မင်းဒေါသနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ သူကို ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နှစ်ခါ ပဲ သွား တောင်းပန် တောင်းပန် သူ တို့ကို စိတ် ကို ထိခိုက် နာကျင် စေတဲ့ အရာကတော့ သူတို့ ရင်ထဲမှာ ကျန် နေစေခဲ့တယ် သား။ တခါတခါမှာ မင်း ဒေါသနဲ့ စိတ်လိုက် မာန်ပါ သူတပါး ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ စိတ်နှလုံး ထိခိုက် နာကျင် အောင် ပြောတာ ဟာ သူတပါး ကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကား တာနဲ့အတူတူ ဘဲ သား။
ဒေါသကြီး တဲ့ သူတိုင်း ကျွန်တော့် လို ဒီသံဝေဂ လေး ရစေချင်လို့ ဒီ ဘာသာပြန် ရေး ဖြစ်သွားခြင်းပါ။
သား။ ။ဖေဖေ သား မေးခွန်း တခု လောက် မေးလို့ ရမလား
အဖေ။ ။ရတယ် မေးလေ ဘာ မေးချင်လို့လဲ
သား။ ။ဖေဖေ တစ်နာရီ ကိုဖေဖေ ဘယ်လောက်ရလဲ ဖေဖေ့ အလုပ်မှာ
အဖေ။ ။ဒါမင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး မင်းဘာကြောင့် ဒီမေးခွန်း မျိုးမေး ရတာလဲ
သား။ ။ကျွန်တော် ဒီလိုဘဲ သိချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖေဖေ ပြောပြပါလားဗျာ...နော် ဖေကြီး
အဖေ။ ။အင်း ငါတစ်နာရီ ကုိ ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက် ရတယ်
အို....ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အတူ သားဖြစ်သူ က သူ့အဖေ ကို ဒီလို ပြန်ပြော လိုက်ပါတယ်။
သား။ ။ဖေဖေ သား ကို ၆၀ လောက် ချီးပေး ပါလားဗျာ။
ဒီလို မေးခွန်းမျိုး ကိုလဲ ကြားရော အဖေဖြစ်သူ က ဒေါသ မထိန်းချုပ် နိုင်တော့သလို သူ၏ ပါးစပ်မှ လဲ ဒေါသ သံဖြင့် ဤသို့ ပြောချလိုက် သည်။
အဖေ။ ။မင်း ဘာတခုမှ အလိုက်ကန်း ဆိုးမသိဘူး။ ငါ အခု ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာနေတာ အားလုံးက မင်း တို့ အတွက်ကြီးဘဲ။ အဲဒါကို ရော မင်းသိလား။ ကိုယ့်ဘို့ ကိုဘဲ ကြည့်ပြီး တကိုယ်ကောင်း ဆန်တဲ့ကောင်။ မင်း အသက်အရွယ်လဲ နည်းနည်း ကြည့်အုံး။ ဒီအချိန်ထိ ဘာမဟုတ်တဲ့ အရုပ်တွေ ဝယ်ပြီး ကစား အုံး မလို့လား။ သွား မင်းငါ့ရှေ့ကအခု ချက်ခြင်း ထွက်သွားစမ်း။
သား ဖြစ်သူဟာ အဖေ ဒေါသကို အားငယ်သော မျက်လုံးများနဲ့ ကြည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် အဖေ အရှေ့က နေအသာ တကြည်ထွက်ခဲ့ပြီး အိပ်ခန်း တံခါးကို ညှင်သာစွာ ပိတ်၍ အခန်းထဲမှာ စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ လဲနေခဲ့တယ်။ အဖေဖြစ်သူ ဟာ ဧည့်ခန်းထဲ ရှိ ကုလားထိုင်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ကြီး ထိုင်၍ သူ၏ သား အကြောင်း ဒေါသကြီးစွာနဲ့တွေးရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဒီကောင် ငါ အလိုလိုက်လို့ တော်တော်ဆိုးနေပြီ။ ငါ ဘယ်လို ဆုံးမ ရင်ကောင်းမလဲ၊ အစ ရှိသဖြင့် အဖေ ဖြစ်သူက တွေးရင်း နေမိတယ်။ တစ်နာရီ ကျော်ကြာတဲ့ အခါမှာ အဖေ ဖြစ်သူက ဒေါသပြေသွားပြီး သူ့ သား အကြောင်းကို စဉ်းစား နေမိတယ်။ အင်းလေ သူ ဒီငွေ ၆၀ ကို တခုခု ဝယ်ဖို့ ငါ့ဆီ က တောင်းတာ ဖြစ်မယ်။ သူလဲ င့ါကို ပိုက်ဆန် ခဏခဏ တောင်းဖူး တာလဲ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ငါ ဒီကောင်ကို သေချာ ပြောလိုက် ပါ အုံးမယ်။အဖေ ဖြစ်သူဟာ သားဖြစ်သူရဲ့ အခန်းရှေ့ သွားပြီး တံခါး ခေါက်လိုက်တယ်။ သား မင်းအိပ်နေပြီလား လို့အဖေ ဖြစ်သူ က လှမ်းပြော လိုက်တယ်။ မအိပ်သေးဘူး ဖေဖေ သား နိုးနေပါတယ် လို့ သား ဖြစ်သူက ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ငါ အခုဘဲ စဉ်းစားနေတာ ခဏ နေတုန်းက ပြောတာ လွန်သွားလား မသိဘူး လို့ အဖေဖြစ်သူ က ပြောရင်း အခန်းထဲကို လှမ်းဝင်လိုက်တယ်။ ငါလဲ တနေကုန် အရမ်း ပင်ပန်းလာလို့ မင်းကို ပြောတာနဲနဲ ပိုဆိုးသွားတယ်။ ရော့ကွာ ဒီမှာ မင်း တောင်းတဲ့ ၆၀ ယူလိုက်တော့။ သားငယ်လေး ဟာ ဝမ်းသာ အားရသော အပြုံးလေးနဲ့ အတူ အဖေရာ အရမ်း ကျေးဇူး တင်တယ်ဗျာလို့ ပြောပြီး ခေါင်းအုံး အောက် ကို သူ့လက်ကလေး ရောက်သွားတယ်။ မှတ်စု စာအုပ် ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးနဲ့ အတူ သူ့ လက်ကို ခေါင်းအုံး အောက်က ပြန်ထုတ် လိုက်တယ်။ အဖေ ဖြစ်သူက ပြန်လည် စိတ်တို သွားတယ်။ ဒီကောင် မှတ်စု စာအုပ် ကြားထဲမှာ တောင် ပိုက်ဆန် အများကြီး ရှိ နေတာ ငါ့ ဆီက ထပ်ပြီး တောင်းနေသေးတယ်လို့ အဖေ ဖြစ်သူက စိတ် ထဲကနေ ရေရွတ်ပြောနေမိတယ်။ သား ဖြစ်သူ က အဖေ ပေးတဲ့ ပိုက်ဆန် ကို ဘေးမှာ ချပြီး သူ့ မှတ်စု ကြားက ပိုက်ဆန် ကို ရေနေလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် အဖေ ဖြစ်သူကို မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ မင်း ဘာကြောင့် ထပ်ပြီး ပိုက်ဆန် တောင်းတာလဲ မင်းမှာ လဲ ပိုက်ဆန် အများကြီး ရှိ နေသေးတာဘဲ လို့ အဖေ ဖြစ်သူက စိတ်ပျက်သော အမူအရာနဲ့ လှမ်းပြော လိုက်တယ်။ သား ဖြစ်သူက ဒီလို ပြန်ပြော လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် မှာ လုံလုံလောက်လောက် မရှိလို့ပေါ့ဖေကြီး ရာ။ အခုတော့ လုံလောက် သွားပါပြီ ဗျာ။ ဖေဖေ သားမှာ အခု ၁၀၀ ရှိ သွားပြီ ဗျ။သား ဖေဖေရဲ့တစ်နာရီ အချိန် ကို ဝယ်ခွင့် ပြုပါနော်။ မနက်ဖြန် အိမ်ကို စောစော ပြန်ခဲ့ ပေးပါဖေဖေ။ သားတို့ တွေဖေဖေနဲ့ ညစာ အတူတူ စားပါရစေ။ သားတို့ မိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ထမင်းမစား ရတာ ဘယ်လောက် ရှိ သွားပြီလဲ ဗျာ။စောစော ပြန်ခဲ့ပေးပါ ဖေဖေရာ .......နော် ။
ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးဖေဖေ မေမေ တို့ကိုသတိရသွားတယ်ဗျာ။ဖေဖေတို့နဲ့ထမင်းလက်ဆုံမစားရတာ၇နှစ်နှစ်
သူ့ ရင်တွေ ခုန်နေသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ အဲဒီနေ့ကပါ။ သူ သူမကို ပါတီတစ်ခုမှာ သူ စတွေ့ခဲ့တာပါ။ သူမ ဟာအရမ်း ကို ချောမွှေ့ လှပလွန်းပါသည်။ သူမ အလှမှာ မြင်သူတိုင်း နှစ်ခါပြန်းငေး ရလောက်အောင် လှချင်တိုင်း လှနေသူပါ။ ပြီးတော့ ဘေးမှာ အဖော် ပါပုံလည်း မရတာကြောင့် ပါတီက ယောင်္ကျားလေး တော်တော် များများ သူမဆီ ချည်းကပ်ကြ ပါတယ်။ သူကတော့ သူမကို အဝေး တနေရာကနေဘဲ ကြည့် နေခဲ့ မိပါတယ်။ သူ့ကိုလဲ မည်သူမျှ သတိထား မည့် ပုံ မပေါ်ပါဘူး။ ပါတီ အပြီးမှာတော့ သူက သူမအနား အရဲစွန့် သွားပြီး သူနဲ့ အတူ ကော်ဖီ သောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကလည်း သူနဲ့ အတူတူ ကော်ဖီ သောက်ဖို့ ဂတိ ပေးပြီး ကော်ဖီဆိုင် ကို လိုက်ခဲ့တယ်။ သူမက သူကို အကဲခတ်ပြီး လေ့လာ နေခဲ့မိတယ်။ သူကြည့်ရတာ အရမ်းကို ရှက်သလိုလို၊ ကြောက်နေသလိုလို ဖြစ်နေပုံပါ။ သူကို ကြည့်ပြီး သူမကော ဘဲ အနေအထိုင် ကြပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ စိတ်ထဲ မှာတော့ ကျေးဇူးပြုပြီး အိမ်ပြန်ပါရစေရှင်လို့ သူမ ပြောနေမိခဲ့တယ်။ သူနဲ့ သူမတို့ အကြား စကားသံ တွေ တိတ်ဆိတ် နေတဲ့ ခဏအကြာမှာ သူဟာ စားပွဲထိုး တယောက် ကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ စားပွဲထိုးလေး အနားရောက်လာ တဲ့ ခဏမှာတော့ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ကို ဆားဗူးလေး ပေးပါလား ကော်ဖီထဲကို ထည့်ဖို့လို့ သူက လှမ်းမှာလိုက်တယ်။ သူမက သူအား အံ့အားသင့်စွာနဲ့ ကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ ထူးဆန်းသော အကျင့်လေးကြောင့် သူမ စကား စလိုက်တယ်။
ဘာလို့ ကော်ဖီထဲ ကို သကြား မထည့်ဘဲ ဆား ထည့်သုံးတာလဲ။ သူမ မေးခွန်းကြောင့် သူက ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ပင်လယ်ဘေး မှာနေတာပါ။ ကျွန်တော်က ပင်လယ် ပျော်လေးပေါ့ ကျွန်တော့် အဖေ အမေနဲ့ မောင်နှမတွေ အားလုံး အခုထိ အဲဒီ ပင်လယ်ဘေးက ရွာကလေး တရွာ မှာပေါ့။ ကျွန်တော် ဒီ အကျင့်လေး ကလဲ အဲဒီ ကနေ ရခဲ့တာပါ။ သူက အဲဒီက တဆင့် သူငယ်ငယ်တုန်းက နေထိုင်ပုံအကြောင်း၊ ကလေးဘဝတုန်းက အကြောင်းလေးတွေနဲ့ အိမ်ကို လွှမ်းဆွတ် မိနေကြောင်း တွေကို ဝေမျှပါတယ်။ သူမကလည်း သူမ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ပြန်လည် ဝေမျှပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သူတို့ စကားဝိုင်းလေး ဟာစိုပြေမှု့ ရှိလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက်သိပြီး ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် သူငယ်ချင်း တွေလို ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူတို့တွေ မကြာခဏ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ ကြတယ်။ တယောက်ပေါ် တယောက် သံယောဇဉ်လေးတွေ တွယ်ခဲ့ကြပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ ချစ်သူ ဘဝကနေ တဆင့် ၂နှစ်အကြာမှာ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ လက်ထက်ပြီးမှာ သူမဟာ မနက်တိုင်း သူ အလုပ် မသွားမှီ ကော်ဖီဖျော် တဲ့ အခါတိုင်း က်ာဖီလေး ထဲကို သူ အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ ဆားတွေထည့် ဖျော်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့တွေ နေလာခဲ့ကြတာ နှစ်၄၀ကျော် ကြာတဲ့နောက်မှာ သူဟာ နှလုံးသွေးတိုး ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ မကွယ်လွန်ခင်မှာ သူဟာ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် ဆိုတဲ့ စာကလေး တဆောင်ကို သူမ အတွက်ထားခဲ့တယ်။ စာထဲမှာတော့ ......
" သို့ အချစ်ဆုံး ချစ်သူလေးရယ်..
ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ငါ့ဘဝ တခုလုံး က မင်းကို လိမ်ခဲ့ မိတဲ့ င့ါအမှား တခုကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ငါ မင်းကို တခု လိမ်ခဲ့မိ ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆားကော်ဖီ ကိစ္စပါဘဲ။ မင်း မှတ်မိအုံးမှာပါ။ မင်းနဲ့ ပထမဆုံး ငါ စတွေ့တဲ့ နေ့ကပေါ့။ ငါဟာ အဲဒီနေ့က အရမ်းကို ရှက် ကြောက် နေခဲ့မိတာပါ။ အဲဒါနဲ့ စားပွဲထိုးလေး ကို သကြား လှမ်းမှာတာ သကြားလို့ မပြောမိ ဘဲ ဆား လို့ ယောင်ရမ်းပြီး ပြောလိုက်မိတာပါ။ အမှန် တကယ်တော့ ငါသကြားလို့ ပြန်ပြီး ပြောင်းပြောချင်ပေမယ့့် အခွင့် မသာခဲ့ပါဘူးဟာ။ ဒီအဖြစ်အပျက် လေးဟာလဲ ငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ အကြောင်းလေး တွေ စပြော စေခဲ့ မိတာ မဟုတ်လား ဟာ။ ငါ မင်းကို အမှန်အတိုင်း ရှင်းပြဖို့ အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ကြိုးစား ခဲ့ ပါသေးတယ်။ မင်း မှတ်မိမှာပါ။ ငါ မင်းကို လုံးဝ မလိမ်ဘူး ဆိုတဲ့ ငါရဲ့ဂတိ စကားလေး ကို ငါ ချိုးဖောက်တယ်လို့ မင်းစွပ်စွဲမှာ၊ မင်းအထင်သေးမှာ၊
မင်း င့ါကို မုန်းသွားမှာ ငါ အ ရမ်း စိုးကြောက် မိလို့ပါ။ မင်း အဲလို စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ ငါ့ကို ခွဲသွားမှာ ကုိလည်း ငါ လုံးဝ မလုိုလား ဘူး ချစ်သူရာ။ အခုတော့ ငါလည်း သေဆုံးခဲ့ပါပြီ။ ငါ ဘာတခုမှ မကြောက်တော့ လို့ မင်းကို အမှန်တွေ ငါဖွင့်ပြော ပါရစေ။ အမှန်တကယ်တော့ ငါ ဆားကော်ဖီ ကို လုံးဝ မကြိုက်ပါဘူး။ ကော်ဖီက ငန်ကြိကြိနဲ့ အရသာ ကို မရှိလှ ပါဘူးဟာ။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူ ငါ မင်းကို သိတဲ့ နေ့ကစပြီး အဲဒီ ကော်ဖီငန်ငန်ကြီး ကို အခု ငါ သေတဲ့အထိ မညီးမညှူ သောက် ခဲ့ရပါတယ်။ ငါ မင်းကို ချစ်လွန်းလို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအရာကို ငါဘယ်တော့မှ နောင်တ မရပါဘူး။ မင်း ငါ့ ဘေးမှာ မင်း အမြဲ ရှိနေခဲ့တာ ကိုက ငါ့အတွက် အကြီးမားဆုံး ပျော်ရွှင်မှု့ ပါချစ်သူ။ ငါ နောက်တခါ အသက် ပြန် ရှင်ခွင့် ရခဲ့မယ် ဆိုရင် မင်းနဲ့ ပြန်ဆုံ ချင်ပါတယ်။ မင်း ဖျော်ပေးတဲ့ ကော်ဖီငန်ငန်လေး ကို ထပ်သောက်ပါ ဆိုရင်တောင် မှ ငါ မညီးမညီူဘဲ မင်းနဲ့ တသက်တာ လက်တွဲ ခွင့် လေးကို ပြန်ရချင် ပါသေး တယ် ချစ်သူ။"
သူမ မျက်ရည်စ တွေက စာပေါ်မှာ တပေါ်က်ပေါ်က် ကျနေခဲ့တယ်။ တစုံတယောက်က သာ သူမကို ဆားကော်ဖီ လေး ဘာ အရသာ ရှိလဲလို့ လှမ်းမေး ခဲ့ရင် သူမ ရင်ထဲ ဖြေဖို့ စကား ကတော့ အသင့်ရှိနေမှာပါ။ သူမ အတွက်တော့ဆားကော်ဖီလေး ဟာ အရမ်းကို ချိုမြိန် လွန်း နေမှာ အသေအချာ ပါဘဲ။
အချစ်ဟာ မေ့စရာ ကောင်းတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး ခွင့်လွှတ် စေတဲ့ အရာပါ။
အချစ်ဟာ မြင်ရတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး နားလည်မှု့ ပေးစေတဲ့ အရာပါ။
အချစ်ဟာ ကြားရတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး နားထောင် စေတဲ့ အရာပါ။
မှတ်ချက်။ ။ပထမဆုံး ဘာသာပြန် ရေးသားတာပါ။ စာဖတ်သူတိုင်း ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှု့ ရှိပါစေ။ ဤဘာသာပြန် အားအောက်ပါ ဝက်ဖ်ဆိုဒ်မှ ပြန်ဆိုထား၏။ အနည်းအကျင်း ပြန်လည် ပြုပြင်ထားသည်။
http://www.maneesh.co.in/ss7.html မူရင်းအား ဤ နေရာတွင် ပြန်လည် ကြည့်ရှုပါ။
ဂျီတော့ကနေ cf ဆိုတဲ့ confrence လေးပြောရအောင်
ဂျီတော့ကနေ cf ဆိုတဲ့ confrence လေးပြောရအောင်သူငယ်ချင်းတုိ့။
၁။ပထမဆုံး သင့်ရဲ့ဂျီတော့မှာ service@gtalk2voip.com ကိုရိုးရိုးသူငယ်ချင်းတယောက်ကိုadd သလို
addလိုက်ပါ။အဲဒီလို add ပြီးရင် confrence အသုံးပြုပုံကိုသင့်ရဲ့ဂျီတော့မှာauto ရှင်းပြပေးထားမှာပါ။
၂။အဲဒီservice@gtalk2voip.com လေးကိုသင် click လုပ်လိုက်ပါ။
၃။service@gtalk2voip.com ရဲ့window message ရိုက်မဲ့နေရာမှာ CONF ဆိုပြီး type ပြီးရင် enter ခေါ်က်ချလိုက်ပါ။(CONF ကအကြီး ပါ။conf ဆိုပြီး အသေးမရိုက်ပါနှင့်)
၄။သင့်ရဲ့ဂျီတော့ကိုservice က auto ခေါ်နေတာသင်တွေ့ရကြားရမှာပါ။သင့် ဂျီတော့ခေါ်တာကို accept လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာ ဂျီတော့ကပြောပါလိမ့်မယ်
(confrence room has created.you are the master of the confrence)ဆိုတဲ့စကားသံလေးကိုသင်ကြားရပါ
၅။အဲဒီနောက်မှာသင်ဒီစာကိုရှာကြည့်ပါ။>>>Conference cookie is: EOQKGPGZLDQM4F3Y ကိုလိုက်ရှာကြည့်ပါ။
၆။cookie ရတာနဲ့သင်ခေါ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီ cookie ဒီလိုလှမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
( / ကိုအရင်ရေးပါ။ပြီးရင် join ဆိုတာရေးပါ။ ပြီးရင် space လေးတခုခြား
ပါ။နောက်ပြီး EOQKGPGZLDQM4F3Y ဒီလို cookie လေးရေးလိုက်ပါ။)ဥပမာ။ ။
၇။သင် cf ပြောလိုတဲ့သင့်မိတ်ဆွေဆီမှာလဲ service@gtalk2voip.com လေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။သင်မိတ်ဆွေကသင်ပေးလိုက်တဲ့ cookie (/join EOQKGPGZLDQM4F3Y) ကိုcopy လုပ်ပြီးသူရဲ့ service@gtalk2voipရဲ့message ရေးတဲ့နေရာမှာ paste လုပ်ရမှာပါ။ပြီးရင်သူကိုenterခေါ်က်ခိုင်းလိုက်ပါ။
၉။အဲဒီနောက်မှာသင့်မိတ်ဆွေဟာဂျီတော့ကautoခေါ်နေတာကိုမြင်နေရမှာပါ။accept ကို click လိုက်ရင်
cf room ထဲကုိ auto သူရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဘဲသင်ခေါ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်း၂၀ လောက်ကိုခေါ်ပြီး
room တခုထဲမှာ အတူတူပြောနိုင်ပါပြီး ။
မှတ်ချက်များ။ ။အကယ်၍သင့်ရဲ့cookie ကရှည်နေတယ်လို့ သင်ယူဆရင်တော့ဒီလိုထပ်လုပ်နိုင်ပါ သေးတယ်။
၁။service@gtalk2voip.com ရဲ့window message ရိုက်မဲ့နေရာမှာ CONF NNN or သင်ပေးလိုတဲ့အမည်တခုကိုရိုက်ရမှာပါ။ ဥပမာ။ ။ CONFspaceBURMA (CONF နဲ့ BURMAတို့ရဲ့ကြားမှာ space လေးတခုခြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။)အဲလို type ပြီးရင် enter ခေါ်က်ချလိုက်ပါ။
၂။ဂျီတော့ကိုservice က auto ခေါ်နေတာသင်တွေ့ရကြားရမှာပါ။သင့် ဂျီတော့ခေါ်တာကို accept လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာ ဂျီတော့ကပြောပါလိမ့်မယ်
၃။အဲဒီနောက်မှာသင်ဒီစာကိုလိုက်ရှာရမှာပါဖြစ်တယ်။>>>Conference cookie is:BURMA ၄။အဲလိုမြင်တာနဲ့သင်ခေါ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီ cookie ဒီလိုလှမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါ။နောက်ပြီး BURMA လို့်ဒီလို cookie လေးရေးလိုက်ပါ။)ဥပမာ။ ။
cookie ကအမြဲတူမနေပါဘူး။သင်cf အသစ်လုပ်တိုင်းcookieအသစ်အမြဲရှိနေမှာပါ။တခါတခါမှာသင်တို့
cf room ဟာconnection ကြောင့် server down သွားတာမျိုး၊cf အသံမကြားတော့တာမျိုးသင်ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
အဲဒီအခါကြရင်တော့သင်service@gtalk2voip.com ဆိုတဲ့window လေးကိုပိတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဂျီတော့ကနေ
sign out လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးလျှင်ပြန် sing in လုပ်ပြီး cf room ko အစကပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဒီစာကို
မရှင်းရင် comments မှာmessage ချန်ပြီးမေးမြန်နိုင်ပါတယ်။
(ဒီcfလုပ်ပုံကို ဒီ http://gtalk2voip.com/ ဝက်ဖ်ဆိုဒ်ကနေလေ့လာပြီး ၊ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုပြီးမှရှင်းပြထား
လူ့ ဘဝ ...သို့...
ခဲဖျက်ပါသော ခဲတံ ကိုကိုင်သောသူသည်
ငယ်စဉ်ကလေး ပညာရေးမှာ ကြိုးစားပါသည်
ပန်းတို့ ထုံမွှမ်း မွှေ့ရာလွှမ်းသည့်
တမ်းတတနဲ့ လွမ်းစရာလေးတွေ တွေးနေရေးနေမိတယ်...ယနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာ အရာရာမှာဘက်စုံတိုး
ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။ ဒီကနေ့ကမ္ဘာလူသားတွေဟာ မတူညီတဲ့အခြေအနေ
တွက်မို့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ရှေ့သို့ဆက်၍ကြိုးစားမြဲပါဘဲ။ဒါကြောင့် သားကြီး အရာရာမှာသီးခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး
တယ်။ရုပ်ရှင်ထဲက "FATHER" ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမင်းအမေကြားတော့မင်းအမေက"FATHER"ဆိုတာ
ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်။ အကျိုးမဲ့ အချည်းနှီး အချိန်ကုန်စရာတွေကိုအဝေးကရှောင်ပါ။အချိန်ဆိုတာကို
လူအမျိုးမျုိးစိတ်အထွေထွေဘဲဗျာ..နုတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီ ကိုယ်သိတဲ့
သူငယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်တို့တွေ မကောင်းတာလေးတွေ "နုတ်" ပြီး ကောင်းတာလေးတွေကိုဘဲ "ဆက်"ကြ
၁ မကောင်းမှုမှန်သမျှကို မလုပ်ရခြင်း
၁ လောဘ ၊ဒေါသ ၊မောဟ တည်းဟူသော
၂ အလောဘ ၊အဒေါသ ၊အမောဟ တည်းဟူသော
အထက်ပါ ဘုရားရှင် တို့၏အဆုံးအမနှင့်
ဘုရားသည်သာ အမြတ်ဆုံး ရတနာ
တရားသည်သာ အမြတ်ဆုံး ရတနာ
သံဃာသည်သာ အမြတ်ဆုံး ရတနာ
ရတတနာရှိရာရတနာလာ ဆိုသည့် စကားအတိုင်း
"နောင်" မှ "မတ" ရလေအောင်
>>>>>>ကောက်ကောက်သွားတာ ၂ မျိုးဘဲရှိတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဘုဓလင်မြို့ကြောင်ပန်းတောရပဉ္စမနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး နောက်ဆုံး, ဆုံးမတော်မူခဲ့သော သမုတိသစ္စာ သြ၀ါဒကထာ
၁။ငယ်ငယ်ကသား ကြီးသော် အား သားအား ဖြစ်ဖို့သင့်၊
ငယ်ငယ်ကသား ကြီးသော် ကျား သားကျား မဖြစ်သင့်၊
ငယ်ငယ်ကသား ကြီးသော် ပျား သားပျား ဖြစ်ဖို့သင့်၊
ငယ်ငယ်ကသား ကြီးသော် ခါး သားခါး မဖြစ်သင့်၊
၂။ငယ်ငယ်ကသ္မီး ကြီးသော် ထီး သ္မီးထီးဖြစ်ဖို့သင့်၊
ငယ်ငယ်ကသ္မီး ကြီးသော် မီး သ္မီးမီးမဖြစ်သင့်၊
ငယ်ငယ်ကသ္မီး ကြီးသော် ဘီး သ္မီးဘီးဖြစ်ဖို့သင့်၊
ငယ်ငယ်ကသ္မီး ကြီးသော် ဂျီး သ္မီးဂျီးမဖြစ်သင့်၊
၃။ငယ်ငယ်ကဆွေမျိုး ကြီးရွှေမျိုး ရွှေမျိုးဖြစ်ဖို့သင့်၊
ငယ်ငယ်ကဆွေမျိုး ကြီးဆွေဆိုး ဆွေဆိုးမဖြစ်သင့်၊
ငယ်ငယ်ကမိတ်ဆွေ ကြီးမိတ်ရွှေ မိတ်ရွှေဖြစ်ဖို့သင့်၊
ငယ်ငယ်ကမိတ်ဆွေ ကြီးမိတ်ထွေ မိတ်ထွေမဖြစ်သင့်၊
၄။ငယ်ငယ်ကတပည့် ကြီးတပည့် တပည့်ဖြစ်ဖို့သင့်၊
ငယ်ငယ်ကတပည့် ကြီးတုပည့် တုပည့်မဖြစ်သင့်၊
ငယ်ငယ်ကတပည့် ကြီးတင်းပြည့် တင်းပြည့်မဖြစ်သင့်၊
၅။ကြီးသော် သားအား တရားလိုက်စား တရားသားဖြစ်ဖို့သင့်၊
ကြီးသော် သ္မီး ထီး တရားလိုက်ပြီး တရားသ္မီးဖြစ်ဖို့သင့်၊
၆။ကြီးသော်သားပျား တရားလိုက်စား တရားသားဖြစ်ဖို့သင့်၊
ကြီသော်သ္မီးဘီး တရားလိုက်ပြီး တရားသ္မီးဖြစ်ဖို့သင့်။
ပတ္တမြားမြေ မှ အညံ့ပန်း